Juventus oo ka go’an inay la soo saxiixato xiddig bar-tilmaameed buuxa u ah Real Madrid – Gool FM
(Turin) 26 Okt 2020. Juventus ayaa wali dooneysa inay la saxiixato mid ka mid ah xiddigaha bar-tilmaameedka u ah kooxda Real Madrid, inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ee soo soo socda, sida lagu sheegay warbixin saxaafadeed.
Juventus ayaa si xoogan u dooneysay inay la soo saxiixato xiddiga reer France iyo kooxda Olympique Lyon ee Houssem Aouar suuqii xagaaga ee la soo dhaafay, si uu uga garab ciyaaro Arthur Melo.
Laakiin kooxda Olympique Lyon ayaa ku adkeysatay in laacibkeedan Houssem Aouar aysan ku fasaxin qiimo ka yar 50 million euros, sidaas darteed Bianconeri waxay go’aansatay inay lacagtaas ku bixiso xiddiga ay la soo saxiixatay ee Federico Chiesa.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Tuttosport” ee dalka Talyaaniga, kooxda Juventus ayaa dib u cusbooneysiin doonta isku daygeeda ah inay xooga saarto suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee soo aadan sida ay ku heli laheyd saxiixa Houssem Aouar, inkastoo heshiiskan ay loolan adag kala kulmi doonto kooxaha Arsenal iyo Paris Saint-Germain.
Si walbaba ha ahaatee, wararku ayaa sheegaya in tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane uu muujiyay sida uu u doonayo saxiixa Houssem Aouar.
Yeelkeedee, Maamulka Bianconeri ayaa doonaya inay la soo saxiixdaan Houssem Aouar, si uu ugu noqdo badelka Aaron Ramsey oo la filayo inuu baxo.